အိုလံပစ် လှုံ့ဆော်မှု အနီရောင် စာအုပ် ပေါ်တွင် ဆောင်းရာသီ အားကစား ပို့စ် များကို ရှာဖွ ေပါ – Pandaily
Feb 09, 2022, 21:48ညနေ 2022/02/09 23:07:31 Pandaily
မကြာသေးမီက အရ သိရသည်Xiaohongshu သည် အိမ်တွင်း လူနေ မှုပုံစံ စတဲ့ မျှဝေ ခြင်း ပလက်ဖောင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်ဇန်န ၀ ါရီလ တွင် ပေကျင်း ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် စတင် ကတည်းက “ နှင်း လျှော စီး” သော့ချက်စာလုံး ပါသော စင်မြင့် ပေါ်ရှိ ပို့စ် များသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၃ ၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Xiaohongshu ၏ ၉၀ ကျော်လွန် သုံးစွဲသူ အချိုးသည် ၇၂% အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး ပလက် ဖော င်း၏ လစဉ် တက်ကြွသော သုံးစွဲ သူများသည် သန်း ၂၀၀ ကျော် ခဲ့သည်။
ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ကာလအတွင်း လူငယ် သုံးစွဲ သူများသည် နှင်း လျှော စီး အပန်းဖြေ စခန်း အသစ် များနှင့် နှင်း လျှော စီး နည်းစနစ် အသစ်များကို စူးစမ်း လေ့လာပြီး မျှဝေ ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Little Red Book ၏ ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် “ စကိတ် စီး ခြင်း” ဟူသော သော့ချက်စာလုံး ပါသော ပို့စ် အရေအတွက်သည် ၂၀၂၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၈၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ နှင့် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် Ice and Snow Movement သည် Little Red Book ရှိ ထိပ်တန်း ဘဝ လမ်းကြောင်း ၁၀ ခု အဖြစ်ရွေးချယ် ခံခဲ့ရသည်။ အသုံးပြုသူ တင် ထားသော ပို့စ် များ ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဤ စာရ င်းသည် လူနေ မှုပုံစံ စတဲ့ ရွေးချယ်မှု အသစ် များ၏ ခန့်မှန်းချက် အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ရှာဖွေမှု ပမာဏ အရ နှင်း လျှော စီး နှင့် စကိတ် စီး ပစ္စည်းများ၊ အဝတ်အထည် များ၊ ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ ဓာတ်ပုံ များ၊ သင်ခန်းစာ များ၊ အပန်းဖြေ စခန်း များ၊။
Mob Institute မှ ထုတ်ဝေသော ၂၀၂၀ ခုနှစ် တရုတ် နှင်း လျှော စီး စက်မှုလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ White Paper က ၂၀၂၀ သည် စက်မှုလုပ်ငန်း စတင် ရန်အတွက် အရေးပါသော နှစ် ဖြစ် ကြောင်းဖော်ပြသည်။ တရုတ်သည် လူငယ် skiers များအတွက် အကြီးဆုံး စျေးကွက် ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့အနက် ၇၇. ၄% သည် တစ်နှစ်လျှင် ၁-၂ ကြိမ် နှင့် ၁၃. ၉% သည် တစ်နှစ်လျှင် ၃-၅ ကြိမ် နှင်း လျှော စီး ကြသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:၂၀ ၂၂ နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း ဆောင်းရာသီ အားကစား ပစ္စည်းများ ရောင်းအား သည် ၉ ၂၄% အထိမြင့်တက် ခဲ့သည်
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ရာသီ မှာ တရုတ် နိုင်ငံမှာ နှင်း လျှော စီး သူ ဦး ရေက ၂၀. ၇၆ သန်း အထိရှိ ခဲ့တယ်။ ကျွမ်းကျင် သူများက ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်း ရေခဲ နှင့် ဆီးနှင်း ခရီးသွား လုပ်ငန်းမှ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၁. ၁ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ၇၃ ဘီလီယံ) ထက်ကျော်လွန် သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေခဲ နှင့် ဆီးနှင်း ခရီးသွား အရေအတွက်သည် သန်း ၅၀၀ ကျော် သွားပြီး အားကစား လုပ်ငန်း တစ်ခုလုံး၏ ငါး ပုံတစ်ပုံ နီးပါး ရှိသည်။ ဤ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ဆောင်းရာသီ အားကစား လုပ်ငန်း အတွက် စျေးကွက် များစွာ ရှိနေ သေးသည်။
ကြာသပတေး နေ့က ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှ ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိ သူက လက်ရှိ သုံးစွဲမှု ကိန်းဂဏန်း များ ကိုမိတ်ဆက် ပေးခဲ့ပြီး ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် အွန်လိုင်း နှစ်သစ်ကူး စျေးဝယ် ပွဲတော် ၏ ရောင်း အားကို မီးမောင်းထိုးပြ ခဲ့သည်။
Industry Feb 10 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 11, 2022